आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल असार २ गते शनिबार::Nepal's No.1 Genuine Online News Portal
प्रकाशित मिति - शनिबार, असार २, २०७५
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल आषाढ २ गते शनिबार इश्वी सन् २०१८ जुन १६ तारीख ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथी चन्द्रमा मिथुन राशिमा प्रातः ०७ः१३ बजे सम्म पश्चात कर्कट राशिमा सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋर्तु – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
आत्मबिश्वासमा बृद्धिहुने समय रहेकोछ । पारीवारिक साथ सहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन । मनोरञ्जनका तथा भौतिक श्रोत साधनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । ब्यपार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय मध्यम रहनेछ ।
स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ । आटँ र शाहसमा बृद्धि हुने समय रहेकोछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहला ।
नयाँकार्यको थालनिको योग रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । खानपानमा बिशेष ध्यान पूर्याउनु होला । बाणीमा मधुरता छाउनेछ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोगमा बृद्धिहुनेछ ।
मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगले समय ब्यतित रहनेछ । ब्यपार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य सुधार रहनेछ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला ।
कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन तनाब पूर्ण ब्यतित रहला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ ।
आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फेला परेतापनि मानसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यवधान आई पर्नेछ । अध्यन अध्यानपनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । शुभ चिन्तकहरुको बृद्यि हुनेछन ।
सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहगायीता साथै सामान्य मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । मानसिक चन्चलताले सताउनेछ ।
यात्राका क्रममा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । नजिकका मित्रजनहरुसगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ ।
स्वास्थ सम्बन्धी समस्याका कारण सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ ।
शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खराबी उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
तपाईको कार्यमा त्रुटि देखाउनेहरुको बृद्यिहुनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । यात्रामा सामान्य झन्झट आईपर्न सक्नेछ ।
बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना समेत रहेकोछ ।